1 st Runner Up ဆုနဲ့ ကျေနပ်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ Burmese Ghouls အသင်းကို သူမရဲ့ ရင်ထဲက Winner ဖြစ်ကြောင်း ပြောပြပြီး ဝန်းရံလိုက်တဲ့ စမိုင်းလ် – Cele Oscar
1 st Runner Up ဆုနဲ့ ကျေနပ်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ Burmese Ghouls အသင်းကို သူမရဲ့ ရင်ထဲက Winner ဖြစ်ကြောင်း ပြောပြပြီး ဝန်းရံလိုက်တဲ့ စမိုင်းလ်
ပရိသတ်ကြီးရေ (၂၀၀၀ ခုနှစ်ဝန်းကျင်မှာ) မော်ဒယ်ေ လာက ကြော်ညာလောက မှာ ထူးထူးကဲကဲ ပေါက်မြောက်အောင်မြင်ရင်း ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုတွေမှာပါ နာမည်ရအောင်မြင်ခဲ့သူ စမိုင်းလ်ဟာ အင်္ဂ လန် ကနေ မြန်မာပြည် ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီးနောက် အနုပညာ လုပ်ငန်းကိုတဖက်တစ် လမ်း ကနေ လုပ်ကိုင်ရင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပါ ချစ်ရတဲ့ အိမ်ထောင်ဖက် နဲ့အတူ ကြိုးစား လုပ်ကိုင်နေသူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဘဝကို အောက်ခြေကနေ အိမ်ထောင်ဖက် နဲ့ အတူ ခက်ခက်ခဲခဲ စတင်လာခဲ့ပြီး ချမ်းသာတဲ့ဘဝ ရောက် ရှိဖို့ အတူတူကြိုးစားခဲ့ရပုံတွေကိုလဲ အင်တာဗျူးတွေမှာ ပြန်လည်မျှဝေလေ့ရှိသူပါ။ အမြဲပျော်ရွှင်စိတ်ချမ်းမြေ့စရာမိသားစုလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီး အလှူအတန်း ဆိုလည်းလက်မနှေးဘဲ ဘာသာရေးမှာလည်း ထိပ်ဆုံးက ပါဝင်ကာ ဦးဆောင်လုပ်တတ်တဲ့မင်းသမီးတစ်လက်ပါ။အမြဲ ပျော်ပျော်နေ တတ်တဲ့ Smileကတော့ ဒီနေ့မှာ M2 World Championship မှာ ပါဝင် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့E-Sport မြန်မာကိုယ် စားပြု Burmese Ghouls အသင်းအတွက် ”ကိုယ်တွေအ တွက်တော့ Winner ပါကလေးတို့ရေ။ မြန်မာပြည်ကြီးကနွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်။
You are our winner #BurmeseGhouls keep your heads up high and be proud of being Myanmar! ”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ 1 st Runner Upဆုနဲ့ ကျေနပ်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ Burmese Ghouls အသင်းကို အားပေးစကားပြောကြားခဲ့တာပါ။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ် ကြီး အားလုံး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေး လို က်ပါတယ်နော်။
ပရိသတျကွီးရေ (၂၀၀၀ ခုနှဈဝနျးကငျြမှာ) မျောဒယျေ လာက ကွျောညာလောက မှာ ထူးထူးကဲကဲ ပေါကျမွောကျအောငျမွငျရငျး ရုပျရှငျဗီဒီယိုတှမှောပါ နာမညျရအောငျမွငျခဲ့သူ စမိုငျးလျဟာ အင်ျဂ လနျ ကနေ မွနျမာပွညျ ကိုပွနျလညျရောကျရှိလာပွီးနောကျ အနုပညာ လုပျငနျးကိုတဖကျတဈ လမျး ကနေ လုပျကိုငျရငျး စီးပှားရေးလုပျငနျးတှကေိုပါ ခဈြရတဲ့ အိမျထောငျဖကျ နဲ့အတူ ကွိုးစား လုပျကိုငျနသေူတဈယောကျပဲဖွဈပါတယျ။
ဘဝကို အောကျခွကေနေ အိမျထောငျဖကျ နဲ့ အတူ ခကျခကျခဲခဲ စတငျလာခဲ့ပွီး ခမျြးသာတဲ့ဘဝ ရောကျ ရှိဖို့ အတူတူကွိုးစားခဲ့ရပုံတှကေိုလဲ အငျတာဗြူးတှမှော ပွနျလညျမြှဝလေရှေိ့သူပါ။ အမွဲပြျောရှငျစိတျခမျြးမွစေ့ရာမိသားစုလေးကိုပိုငျဆိုငျထားပွီး အလှူအတနျး ဆိုလညျးလကျမနှေးဘဲ ဘာသာရေးမှာလညျး ထိပျဆုံးက ပါဝငျကာ ဦးဆောငျလုပျတတျတဲ့မငျးသမီးတဈလကျပါ။အမွဲ ပြျောပြျောနေ တတျတဲ့ Smileကတော့ ဒီနမှေ့ာ M2 World Championship မှာ ပါဝငျ ယှဉျပွိုငျခဲ့တဲ့E-Sport မွနျမာကိုယျ စားပွု Burmese Ghouls အသငျးအတှကျ ”ကိုယျတှအေ တှကျတော့ Winner ပါကလေးတို့ရေ။ မွနျမာပွညျကွီးကနှေးထှေးစှာကွိုဆိုပါတယျ။
You are our winner #BurmeseGhouls keep your heads up high and be proud of being Myanmar! ”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ 1 st Runner Upဆုနဲ့ ကနြေပျပိုငျဆိုငျခဲ့ရတဲ့ Burmese Ghouls အသငျးကို အားပေးစကားပွောကွားခဲ့တာပါ။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျ ကွီး အားလုံး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေး လို ကျပါတယျနျော။
ဆင်းရဲ ပေမယ့် သူများ ပိုက်ဆံ အလကား မလို ချင်တဲ့ ပန်းရောင်းတဲ့ ကလေးလေ; ရဲ့ လေးစား စရာ စိတ်ဓာတ်
ဒုတိယကိုယ်ဝန်မွေးခါနီးလေး မှာတောင်ဗိုက်လေးလုံးလုံးလေးနဲ့ လှနေပြီး ကမ်းခြေတွင်အပန်းဖြေ အနားယူနေတဲ့ မိုးယုစံ